आश्चर्यकर्महरू त मेरो जीवनको सबैभन्दा सजिलो काम भन्छु किनकि म ती गर्दिन परमेश्वर गर्नुहुन्छ । | eBachan Nepali Christian Magazine
आश्चर्यकर्महरू त मेरो जीवनको सबैभन्दा सजिलो काम भन्छु किनकि म ती गर्दिन परमेश्वर गर्नुहुन्छ ।
बसन्त सुवेदी (२१) वर्षका युवा हुनुहुन्छ । उहाँको स्थानिय घर लम्की, कैलाली हो हाल साउद अफ्रिकामा पढाईको सिलसिलामा हुनुहुन्छ । उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सानो अंश प्रस्तुत गर्दछौं ।
युवा अवस्थामा परमेश्वरले काम कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
परमेश्वरमा उमेर होइन, तिर्खा गर्नेको हुनुहुन्छ । तपाईं जति तिर्खा गर्नुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ । परमेश्वर त झन् हामी हरेकको लागि पर्खीराख्नु भएको छ, हरेक व्यक्तिद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ ।
परमेश्वरले क्षमतवानलाई मात्र बोलाउनु हुन्न तर बोलाएकालाई क्षमतवान् बनाउनुहुन्छ ।
छोटकरीमा तपाईंको परमेश्वरस“गको सुरुवाती यात्रा बताइदिनुहोस ?
म बालस·तीदेखि नै चर्च आउनेजाने सामान्य ख्रीष्टिय जीवन
जिइरहेको थिएँ । १७ वर्ष हुँदा पवित्र आत्मासँग जम्काभेट भयो । परमेश्वरको आवाजको पहिलो अनुभव गरेँ जसले मेरो जीवनमा ठूलो भिन्नता ल्यायो । त्यसपछि परमेश्वरसँगको मेरो आत्मिक यात्रा नयाँ तरिकाले सुरु भयो ।
म आराधनाको समयमा थिए, “हामी प्रेरित २९” को अनि त्यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो आराधनामा अगुवाइ गरिराख्नु भएको
थियो । उहाँलाई परमेश्वरले देखाउनु भएछ अनि उहाँले भन्नुभयो, ‘“बसन्त, तिमी एक शक्तिशाली प्रचारक हौ, तिमीले शक्तिका साथ वचन प्रचार गर्नेछौ, परमेश्वरले तिमीलाई वचनका प्रकाशहरू दिनुहुनेछ ।” अनि त्यो कुराले मेरो सारा जीवन बद्लिदियो । जीवन बद्लीन घण्टाउको प्रचार चाहिँदैन परमेश्वरबाटको एउटै आवाजले पुरा जीवन बदल्न सक्छ । त्यसपछि म प्रार्थना गर्न थाले वचन पढ्न थाले अझै, त्यसरी परमेश्वरले कामहरू गर्न थाल्नुभयो । सेवकाइ सुरु भयो ।
सेवकाइ के हो ? कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ ?
मेरो लागि सेवकाइ जीवन हो, सेवकाइ एक जिउने तरिका हो ।
सेवकाइ हामी के गर्छौ भन्दा पनि हामी कसरी जिउछौ र गर्छौ भन्ने
हो । त्यसपछि परमेश्वरले सेवकाइको ढोकाहरू खोल्न थाल्नु
भयो । धेरै मण्डलीहरूमा पु¥याउनु भयो । त्यहाँ अच्चमका, ठूला ठूला आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो । त्यही १० वटा जिल्लाहरूको करीब ३० भन्दा बेसी मण्डलीहरूमा पुगे होला । परमेश्वरले हरेक ठाउँहरूमा नयाँ–नयाँ कामहरू गर्नुहुन्थ्यो ।
परमेश्वरले गर्नुभएको केही कामहरू छोटकरीमा भनिदिनुस न ?
परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ । अनि यो असम्भव कुरा हो कि ख्रीष्टियनले प्रार्थना गर्ने र केही नहुने । धेरै बिरामीहरू निको हुनुभयो, अन्धाले देख्नुभएको छ, कान नसुन्नेहरू धेरै निको हुनुभएको छ, कति त कोमाबाट, मेडिकल बेडबाट बाहिर निस्किनु भएको छ, कतिले भुतात्माहरूबाट छुटकारा पाउनुभएको छ । यो सब देखेर धेरैले
परमेश्वरमा विश्वास पनि गर्नुभएको छ । परमेश्वरले धेरैको जीवन परिवर्तन गर्नुभएको छ ।
एउटा बिरामीको लागि प्रार्थना गर्न कतिको गाह्रो छ ?
गाह्रो ¤ मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन । अझ आश्चर्यकर्महरू त मेरो जीवनको सबैभन्दा सजिलो काम भन्छु किनकि म ति गर्दिन परमेश्वर गर्नुहुन्छ । हामी त एक औंजार मात्र हो ।
युवा अवस्थामै सेवामा हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव हुन्छ ?
अनुभव भन्दा पनि यो जीवन हो, जिउने तरिका हो । फेरी रहन पनि सक्दिन यो सब नगरी । जब तपाईं परमेश्वरसँग जिउनु कति आनन्द छ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ तब तपाईं जीवनमा अरू केही रोज्नु हुन्न ।
तपाईं कुन सेवास“ग सम्बन्धीत हुनुहुन्छ ?
म “हामी प्रेरित २९” मा छु । त्यही हुर्केँ, त्यही सिकेँ, त्यसैमा छु । यो सेवकाइ भन्दा पनि मेरो लागि परिवार हो र घर हो ।
यो एक परिवार हो । बाइवल प्रेरित २८ सम्म छ र अहिले हामी संसारमा भएका सबै विश्वासी प्रेरित २९ हौ । प्रेरितहरूले त्यो बेला जसरी येशू ख्रीष्टमा रही पवित्राआत्माद्वारा परमेश्वरको कामहरू निरन्तरता गरिरहेका छौ, परमेश्वरको जीवित पुस्तक भएर । अब बाँकी सम्प्रदायको कुरा मलाई थाहा छैन, हामी सत्यलाई पछ्याउछौ र सत्य कुनै शिक्षा होइन, व्यक्ति हो जसको नाम येशू ख्रीष्ट हो । येशूले भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ ।” हामी त्यही सत्य
पछ्याउँछौ । हामी येशूलाई पछ्याउछौ ।
अहिले साउथ अफ्रिकामा हुनुहुन्छ, त्यहा“ परमेश्वरले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ?
हजुर, मैले अघि नै भने परमेश्वर सधै हाम्रो लागि तयार हुनुहुन्छ । हामीचाहिँ जहाँ भए पनि तयार रहनुपर्छ । उहाँको
लागि । म यहाँ आइसके पछि पनि धेरै अच्चमका, ठूला कामहरू गर्नुभएको छ । म सपि·मल, रोडहरूतिर हुँदा पनि
बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु । परमेश्वरले धेरैलाई निको पार्नुभएको छ । म एकपटक एउटा हस्पिटल गएको थिएँ, धेरै
बिरामीहरू बेडबाट उठ्नुभएको छ, व्हीलचियर पनि छोड्नु भएको छ, धेरैको अचम्म तरिकाले जीवन परिवर्तन भएको छ अनि धेरैले
येशूलाई विश्वास पनि गर्नुभएको छ । परमेश्वर साँच्चै महान् र भलो हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरको काम गर्न कत्तिको मुल्य चुकाउनु प¥यो ?
अवश्य चुकाउनु पर्छ । के कति चुकाए, किनकि हिसाब गर्न थाल्ने हो भने येशूले जति चुकाउनु भयो त्यसको अगाडि यो केही पनि
होइन । म हराएको थिएँ, उहाँ खोज्न आउनुभयो, प्रेम गर्नु भयो । मचाहिँ त्यो खुशीमा म जिउछु, मुल्यसुल्य भन्दा पनि उहाँले दिएको जीवन जिइरहेको मात्र हो ।
परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईं जहाँ, जस्तो सुकै अवस्थामा भएपनि उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ । जति जना
परमेश्वरले मेरो जीवनमा पनि काम गरेको चाहन्छु, उहाँको पूर्णतामा जिउन चाहन्छु भन्ने हुनुहुन्छ, केही गर्न पर्दैन । तपाईंको लागि
परमेश्वर सधै तयार हुनुहुन्छ । प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, वचन अध्ययन गर्नुहोस्, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ । बाइबल नखोली, अध्ययन नगरी
परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ भन्नु — मोबाइल स्विच अफ गरेर मेरो फोन आउँदैछ भन्नु जस्तै हो । पवित्र आत्मा सबै भन्दा ठूलो र असल शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईंको हरेक कमजोरीमा तपाईंलाई
सिकाउनुहुन्छ । तयार हुनुहोस्, खडा हुनुहोस् परमेश्वरको लागि, तपाईं संसार बदल्न सक्नुहुन्छ । किनकि सृष्टिको तिब्र आशाले पनि
परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकटीकरणलाई पर्खिरहेको छ (रोमी ८ः१९) ।
Previous: कार्नेट नेपालका निर्देशक पदबाट बर्खास्त
Next: “जाऊ फल फलाउ “